Anjara birikiny ho fanatsarana ity taranja ity dia hanatanteraka fampiofanana any Andramasina ny sabotsy izao. Hanampy azy koa teknisianina vehivavy iray mandritra izany. Ny fiomanana ara-batana sy ara-tsaina moa no tena hibahana mandritra izany fiofanana izany. Mila mahafehy tsara ny fitsipika mifehy ity taranja ity sy ny fampiharana izany. Tanjona moa dia ny fizarana traikefa sy hampitomboana ny lentan` ny mpilalao Malagasy eo amin` ny taranja basikety. Tena ilaina ny fanarahana fiofanana toy izao hahafahana mampitombo ny fahalalana indrindra ho an`ny firenena toa an`I Madagasikara. Tsara no manamarika fa I Danz dia efa mahafeno fepetra ho mpanazatra. Nilalao tany Seychelles izy nanomboka ny taona 2016. Efa niverina eo anivon` ny GNBC izy amin` izao.